Fitaovana fikosoham-bary vita amin'ny koba totoina amin'ny farine fikosoham-bary dia matetika ampiasaina amin'ny fampitana fitaovana ireo mpampita vy. Izy ireo dia mampita ny masinina miantehitra amin'ny tadin'ny fihodinana mba hanosehana ireo akora be indrindra ho an'ny fivezivezena marindrano na ny fampitana. Andiany TLSS ...Hamaky bebe kokoa »
Masinina famolavolana koba / lafarinina ho an'ny milina fitotoam-bary
Ny drafitra FSFG dia ampiharina betsaka amin'ny zavamaniry fikosoham-bary maoderina sy ny fikosoham-bary. Nampiasaina indrindra ho an'ny varimbazaha nototoina sy ny fanivanana fitaovana afovoany, azo ampiasaina amin'ny fanasivanana ny lafarinina ihany koa. Ny famolavolana sieving isan-karazany dia natao ho an'ny sifting samihafa sy ny midd ...Hamaky bebe kokoa »
Ao amin'ny fikosoham-bary, ny dingan'ny fanesorana ireo vato amin'ny varimbazaha dia antsoina hoe de-vato. Ny vato lehibe sy bitika misy habe amin'ny poti-javatra hafa noho ny an'ny varimbazaha dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fomba fitiliana tsotra, fa kosa ny vato sasany manana habe mitovy amin'ny varimbazaha dia mitaky manokana ...Hamaky bebe kokoa »
Ny indostrian'ny sakafo dia indostrian'ny andrin'ny toekarem-pirenenan'i Sina, ary ny masinina sakafo dia indostrialy manome fitaovana ho an'ny indostrian'ny sakafo. Miaraka amin'ny fanatsarana ny takian'ny olona amin'ny kolotsaina ara-tsakafo sy ny fanambinana fisakafoanana, trano fisakafoanana ary othe ...Hamaky bebe kokoa »